Sevhisi - Beijing Ca-Long Injiniya Machinery Co., Ltd.
Seimwe yezvinhu zvakakosha zve AMP, kuita kwayo kwakanaka kunonyanya kudikanwa. Dhizaini yedu mubatanidzwa wekutanga wegiravhiti uye wechipiri bhegi firita, iyo inosangana nezvose zvakatipoteredza zvinodiwa muChina nenyika dzeEurope. Pasi pemamiriro ezvinhu ekushanda, kusvibiswa kwekubuda pane iyo firita mweya nzira inogona kusvika yakajairwa 20mg / m3 uye kunyange zvirinani.
Kuona mashandiro efirita, tinosarudza mabhegi efaera akagadzirwa neAmerican Dupont zvinhu Nomex, ine hupenyu hwakareba hwekushanda uye kuita kwakanyanya kushanda.
Mumairi maviri ekupedzisira, isu takaisa muFinland 2 seti yefaera kugadzirisa iyo yekare asphalt yekusanganisa chirimwa. Chigadzirwa chedu chinokwanisa kusangana nezvose zvakatarisirwa zvemunharaunda uye nekurumbidzwa nemushandisi.
Hot mafuta bhaira
Hot mafuta bhaira anoshandiswa kudziyisa bhitumini matangi nemafuta anopisa, ayo anotenderera mupombi dzekupisa sisitimu nematangi ebitumen. Bhaira inoshongedzerwa yakakwira nhanho yekuwedzera tangi uye yepazasi nhanho yekuchengetera tangi, iyo inova nechokwadi chekuchengetedza uye yakakwira kushanda kushanda.
Kana zviri zvinopisa, isu takabatana pamwe neanozivikanwa pasi rese brand brand kubva kuItaria, Baitur. Rudzi rwemafuta runosarudzika kubva kumafuta akareruka, mafuta anorema uye gasi rechisikigo. Iko kuvesa uye kugadzirisa kwemoto zvinodzorwa otomatiki.
Iko kugona kweaboiler ndiko 300,000 Kcal / h - 160,000Kcal / h.
Granuated Yekuwedzera Sisitimu
Granuated yekuwedzera system inopedzisa kuyera uye kutakura chirungiso. Kuti uwane yakakwira yekuita asphalt, zvinowedzera, seViatop, Topcel, zvinogona kuwedzerwa mukugadzira asphalt.
Granulate additives inodyiswa neyakasiyana hopper, kutanga mune yekuchengetera silo, uyezve kuburikidza nepombi uye butterfly vharafu, zvinowedzera zvinopinda zvinorema hopper. Nekubatsira kwekutonga kwemakomputa, zvinowedzerwa zvichaiswa mumusanganisi.
Ca-Long chirimwa chakashongedzerwa pasi rese inozivikanwa brand spares, iyo ine hupenyu hwakareba hupenyu.
Semazuva ese, isu tine masheya emarudzi ese epareti emutengi anoda emergency, saka mutengi wedu anogona kuwana maspareti nekukurumidza sezvinobvira kuburikidza nemhepo.
Chinhu chikuru cheCa-Long control system ye AMP ndeyehukama hwayo murume muchina interface, iyo inorumbidzwa zvikuru nevashandisi veCa-Long AMP. Tinogona kupa chirongwa chekuvandudza sevhisi ku AMP yechero mhando muchirungu kana Russian vhezheni.
Nekuvandudzwa kweindasitiri ye AMP, chirimwa chekare chichagadziridzwa kuzadzisa zvido zvitsva uye chengetedza mutengo kubva pakutenga chirimwa chitsva. Kutanga, isu tinogona kupa chero chinhu cheAMP kuti chienderane neyekare chirimwa. Kechipiri, isu tinogona kuwedzera RAP system kune chero yekare AMP yekuchengetedza inogadzira mutengo. Chechitatu, chero AMP inogona kuvandudzwa kune yakasvibirira mhando chirimwa chekusangana nezvitsva zvezvakatipoteredza.